धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा ढुंगाना - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा ढुंगाना
काठमाडौं, २१ पुस । सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा भीष्मराज ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल, राजस्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सम्मिलित सिफारिश समितिले पुसको दोस्रो साता ढुंगाना सहित बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी र केशव श्रेष्ठको नाम सिफारिश गरेको थियो ।
सिफारिश समितिले दिएको सूची अर्थमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले ढुंगानालाई नियुक्त गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक ढुंगानालाई यसअघि बोर्डकै विज्ञ सदस्य बनाइएको थियो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँगको निकटताका आधारमा उनले राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएलगत्तै धितोपत्र बोर्डको विज्ञ सदस्यका रुपमा नियुक्ति पाएका थिए ।
बोर्डको अध्यक्ष बन्न ८ जनाले आवेदन दिएकोमा भिष्मराज ढुंगाना, निरज गिरी र डा. केशवप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्ट लिस्टमा परेको थिए । आवेदन दिएकाहरुको व्यक्तिगत विवरण, कार्यानुभव आदिको मूल्यांकनपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण राखिएको थियो ।